Aims and Duty – University Of Computer Studies Thaton
The Computer University of Thaton is opened with the aim of nurturing new generations who can keep abreast with different nations and producing IT professionals who are needed to the local area and the country. With the result of that the Union of Myanmar will becomeamodern and developed country. It is reported that in producing skilled practitioners with these aims, the Computer University of Thaton is teachingatotal number of 627 students in the Academic year 2018-2019. And it is able to teach almost about 1000 students in consequence of the classrooms at the present.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အား ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာစေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်နှင့်ဒေသအတွင်း လိုအပ်သော IT ပညာရှင်များ မွေးထုတ် ပေးနိုင်ရန်၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သော မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအား ပျိုးထောင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(သထုံ)ကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းရည်ရွယ် ချက်များဖြင့် မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိရာ၌ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(သထုံ) အနေဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဦးရေ စုစုပေါင်း (၆၂၇)ဦး ပညာသင်ကြား ပေးလျက်ရှိပြီး၊ လက်ရှိစာသင်ခန်းအနေအထားများအရ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း (၁၀၀၀)ဦးခန့် လက်ခံသင်ကြားပေးနိုင်သည့် အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း April 20, 2022
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(သထုံ) ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း ( ၂၀၂၀ – ပြည့်နှစ်အောင်) April 1, 2022
Total Visitors: 8,440
Last Post Date: April 20, 2022
Copyright © 2022 University Of Computer Studies Thaton.